OTU ESI EDOZI òKé NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Zụlite òké ahụ na Windows 10
Ntugharị igwe na keyboard bụ ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke onye ọrụ ahụ. Omume ziri ezi ya na-emetụta otú anyị nwere ike isi rụọ ọrụ ụfọdụ ngwa ngwa ma dị mfe. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otu esi ahazi òké na Windows 10.
Iji gbanwee ogidi nke òké ahụ, ịnwere ike iji ngwaọrụ abụọ - ngwanrọ nke atọ ma ọ bụ nhọrọ ntinye n'ime usoro. N'okwu mbụ, anyị nwere ọtụtụ ọrụ, ma ịbawanyewanye mgbagwoju anya na ọrụ ahụ, na nke abụọ, anyị nwere ike ịhazigharị parameters site n'aka anyị ozugbo.
Mmemme nke atọ
Enwere ike ịwa software a n'ime akụkụ abụọ - eluigwe na ala na ụlọ ọrụ. Ngwaahịa mbụ na-arụ ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ, na nke abụọ na ngwaọrụ nke ndị nrụpụtara.
Gụkwuo: Software iji hazie òké
Anyị ga-eji nhọrọ mbụ ma tụlee usoro na ihe atụ nke Njikwa bọtịnụ X-souris. Ngwaọrụ a dị oké mkpa maka ịmepụta ụmụ oke na bọtịnụ ndị ọzọ site na ndị na-ere ahịa ndị enweghị software ha.
Weghachị usoro ihe omume site na saịtị ahụ
Mgbe ị wụnye ma na-agba ọsọ ihe mbụ gbanwee asụsụ Russian.
Gaa na menu "Ntọala".
Tab "Asụsụ" họrọ "Russian (Russia)" wee pịa Ok.
Na windo isi, pịa "Tinye" ma mechie ya.
Kpọgharịa usoro ahụ ọzọ site na ịpị abụọ na akara ngosi ya na ebe ngosi.
Ugbu a ị nwere ike ịga n'ihu ịtọ ntọala. Ka anyi bido n'usoro ihe omume a. Ọ na-enye gị ohere ikenye omume na bọtịnụ òké ọ bụla, tinyere mgbakwunye, ọ bụrụ na ọ dị ugbu a. Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume ịmepụta edemede abụọ, tinyekwara ọtụtụ profaịlụ maka ngwa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, na-arụ ọrụ na Photoshop, anyị na-ahọrọ profaịlụ a kwadebere na ya, na-agbanye n'etiti etiti, anyị "na-amanye" òké iji rụọ ọrụ dịgasị iche iche.
Mepụta profaịlụ, nke anyị na-pịa "Tinye".
Na-esote, họrọ usoro ihe omume site na listi nke na-agba ọsọ, ma ọ bụ pịa bọtịnụ nchọgharị.
Chọta faịlụ a ga-ebi na ya na disk ma mepee ya.
Nye aha profaịlụ n'ọhịa "Nkọwapụta" ma Ok.
Pịa na profaịlụ kere ma malite ịtọlite.
Na akụkụ aka nri nke interface, họrọ igodo nke anyị chọrọ ịhazi ihe ahụ, gbasaa ndepụta ahụ. Dịka ọmụmaatụ, họrọ nkedo.
Mgbe ị gụsịrị ntụziaka ahụ, tinye igodo ndị dị mkpa. Kwe ka ọ bụrụ nchikota CTRL + SHIFT + ALT + E.
Nye aha ihe ahụ ma pịa Ok.
E debere profaịlụ ahụ, ugbu a, mgbe ị na-arụ ọrụ na Photoshop, ọ ga-ekwe omume ijikọta ala site na ịpị bọtịnụ ahọrọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji gbanyụọ njirimara a, gbanwee "Layer 2" na Oghere Ntanetị X-Mouse Control na ebe ngosi (aka nri na akara ngosi - "Ụdị").
Ihe nkwekorita a abughi dika oru, ma o zuru oke iji buli oru nke ndi mmadu na-eji ngwa abuo na ugbo. Ị nwere ike ịbanye na ntọala site na "Ngalaba " Windows. Ngalaba a mepee site na menu "Malite" ma ọ bụ ụzọ mkpirisi Na-emeri + m.
Ọzọ ị ga-aga na ngọngọ ahụ "Ngwaọrụ".
Lee na taabụ "Nta", ma ọ bụ nhọrọ anyị chọrọ.
Site na "isi" anyị na-aghọta ngosipụta ndị dị na windo ntọala. N'ime ya, ị nwere ike ịhọrọ bọtịnụ ọrụ ahụ (nke anyị ji pịa ihe ndị ahụ iji gosi ma ọ bụ mepee).
Ekem abia nhọrọ nbudata - onu ogugu ugbua na-aga n'otu uzo na itinye akwukwoghari na windo na-adighi ike. Ọrụ ikpeazụ a na-arụ ọrụ dị ka nke a: dịka ọmụmaatụ, ị dee ederede na akwụkwọ edetu, ma n'otu oge ị na-abanye n'ime nchọgharị ahụ. Ugbu a, ọ dịghị mkpa ka ị gbanwee gaa na windo ya, naanị ị nwere ike ịkụnye ya ma kọgharịa ya na wiilị. A ga-ahụ akwụkwọ na-arụ ọrụ.
Maka ịmatakwu nke ọma na-eso njikọ ahụ "Ntọala Nzuzo di elu".
Na taabụ a, na ngọngọ mbu, ị nwere ike ịgbanwe nhazi nke bọtịnụ, ya bụ, gbanwee ha.
A na-agbanwe ọsọ ọsọ ugboro abụọ na ihe mmịfe kwekọrọ. N'ihe dị elu karịa uru, obere oge ga-agafe n'etiti pịa iji mepee folda ma ọ bụ malite faịlụ.
Ihe nkwụsị ahụ nwere ntọala nkwụsị. Njirimara a na-enye gị ohere ịdọrọ ihe na-enweghị njide ahụ, ya bụ, otu igodo, bugharịa, pịa ọzọ.
Ọ bụrụ na ị gaa "Nhọrọ", ị nwere ike ịtọ oge, mgbe nke ahụ bọtịnụ ga-arapara.
Ntọala ụkwụ a dị ezigbo mma: ebe a, ị nwere ike ịkọwapụta naanị akụkụ nke nsụgharị dị na vetikal. Na nke a, arụ ọrụ nke abụọ ga-akwado ya.
A na-agba ọsọ nke cursor na ngọngọ mbụ iji ihe mmịfe ahụ. Ịkwesịrị igbanwe ya dabara na ihuenyo na mmetụta gị. N'izugbe, nhọrọ kachasị mma bụ mgbe onye na-arụ ọrụ na-agafe n'ebe dị anya n'etiti ikuku ndị ọzọ na otu aka. Ntinye aka n 'ụba dị elu na-enyere aka idozi akụ ahụ n'ọsọ ọsọ ọsọ, na-egbochi njide ya.
Ogwe na-esote na-enye gị ohere ịgbalite ọnọdụ nhazi ihuenyo na igbe igbe. Dịka ọmụmaatụ, njehie ma ọ bụ ozi na-egosi na ihuenyo ahụ, ma pointer na-agbanye bọtịnụ ozugbo "OK", "Ee" ma ọ bụ "Kagbuo".
Ọzọ bụ nchọta ntọala.
O bughi ihe doro anya nke mere eji choro nhọrọ a, mana ihe kpatara ya bu:
Izobe ihe niile dị mfe: mgbe ị na-ede ederede, onye na-akpọ cursor akwụsị, nke dị mfe.
Ọrụ "Ebe Mark" na-enye gị ohere ịchọpụta akụ ahụ, ọ bụrụ na ị furu efu, jiri igodo Ctrl.
Ọ dị ka mgbagwoju concentric na-agagharị na etiti.
E nwere ihe ọzọ taabụ maka ịtọ ntọala ahụ. N'ebe a ị nwere ike ịhọrọ ịhọrọ ọdịdị ya na ọkwa dị iche iche ma ọ bụ ọbụna dochie akụ ahụ na ihe oyiyi ọzọ.
Gụkwuo: Gbanwee cursor na Windows 10
Echefula na ntọala ahụ anaghị etinye aka na ya, yabụ mgbe ha gwụsịrị ị kwesịrị ịpị bọtịnụ kwekọrọ.
A ghaghị imezi ụkpụrụ nke ndị na-asụ cursor n'otu n'otu maka onye ọrụ ọ bụla, mana enwere iwu ụfọdụ iji mee ngwa ngwa ma belata ike ọgwụgwụ. Mbụ niile na-emetụta ọsọ ọsọ. Obere mmegharị ị ga - eme, nke ka mma. Ọ na-adabere na ahụmahụ: ọ bụrụ na ị ji obi ike jiri òké ahụ mee ihe, ị nwere ike ịgbatị ya dị ka o kwere mee, ma ọ bụghị na ị ga - enweta "faịlụ" na ụzọ mkpirisi, nke anaghị adaba. Iwu nke abụọ nwere ike itinye n'ọrụ ọ bụghị naanị maka ihe onwunwe taa: ọrụ ọhụrụ (maka onye ọrụ) anaghị aba uru mgbe niile (ịrapara, ịchọpụta), mgbe ụfọdụ, ọ nwere ike igbochi ọrụ nkịtị, n'ihi ya ọ dịghị mkpa iji ha mee ihe n'ụzọ na-enweghị isi.